Trenbolone Enanthate အမှုန့်ကိုရောစပ်ရန် Trenbololone စာရွက်ကိုအသုံးပြုပုံ
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Trenbolone Enanthate အမှုန့်ကိုရောစပ်ရန် Trenbololone စာရွက်ကိုအသုံးပြုပုံ
အပေါ် Posted 05 / 21 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Trenbolone Enanthate ကဘာလဲ?
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) သည် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကြွက်သားထုထည်ကိုထပ်ဖြည့်စေသောအစွမ်းထက်ဆေးများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အစပိုင်းတွင်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ပေမယ့် ကြွက်သားကြီးထွား တိရစ္ဆာန်များအတွက်ကာယဗလအကြား၎င်း၏ဝယ်လိုအားကြွက်သားကြီးထွားအတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှုကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
Tren E (Trenbolone enanthate) သည်အရှည်ဆုံး esterified ပုံစံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကြာရှည်စွာစုပ်ယူနိုင်မှုနှုန်းရှိသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လွှတ်သည့်အရာသည်နှေးကွေးသည်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းဝက် (half-life) သည် ၁၂ ရက်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အထွတ်အထိပ်အချိန်ကိုလျှော့ချစေသည်။ သက်တမ်းဝက် (half-life) သည်ရှည်လျားသော anabolic လုပ်ဆောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။
ဘယ္လို trenbolone enanthate အမှုန့်ရောနှောဖို့ trenbolone စာရွက်ကိုသုံးပါ
Trenbolone Enanthate စာရွက်
100mg / mL Trenbolone Enanthate စာရွက်အတွက် 100mL
10g Trenbolone Enanthate အမှုန့် (7.5mL)
5mL Grapeseed ရေနံ
လိုအပ်သော Tools များ
22um ဆေးထိုးအပ် filter ကို
၁၈-၂၁ gauge အပ်နှင့်အတူ 3mL နှင့် 20mL / 60ml ဆေးထိုးအပ်
တစ်ဦးကဒစ်ဂျစ်တယ်စကေး (+ -0.1 သို့မဟုတ် 0.01)
ခြေလှမ်းတို့က Trenbolone Enanthate Homebrew ခြေလှမ်း
-Step 1: အ Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစား trenbolone enanthate အမှုန့်
-Step 2: အ beaker သို့ trenbolone အမှုန့်, BA ဘွဲ့များနှင့် BB Add
- အဆင့် ၃: ရေပူတွင် beaker ကိုအပူပေးပါ
-Step 4: grapeseed ရေနံ Add
-Step 6: ပယ်လှန်ထုပ်သူတို့နှင့်အတူ Crimp
1 အဆင့်: အ Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစား trenbolone enanthate အမှုန့်
trenbolone enantahte ရေနံလုပ် trenbolone enanthate စာရွက်သုံးပါ, သင်ယူကိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဟာအလေးချိန်ရန်ဖြစ်ပါသည် Trenbolone Enanthate အမှုန့် တစ်ဖန် beaker ၌တည်၏။ သငျသညျလွန်းခြင်းသို့မဟုတ် Tren Enanthate ၏လျော့နည်းရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့အလေးချိန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအတိအကျရှာရန်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအောင်မြင်ရန်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
အဆင့် 2: ပေါင်း trenbolone အမှုန့်, BA ဘွဲ့များနှင့် BB အဆိုပါ beaker သို့
ပြီးတော့ Benzyl Benzoate (BB) နဲ့ Benzyl Alcohol (BA) နဲ့ရောထွေးပါ။ Trenbolone ကုန်ကြမ်းသည်အမှုန့်များတွင်စတင်ပျော်ဝင်သွားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်၏မြန်ဆန်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါကအဆင့် ၃ ကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် 3: တစ်ဦးရေရေချိုးအတွက် beaker အပူ
တစ်ဦးရေရေချိုးအတွက် beaker အပူလုပ်ငန်းစဉ်၏အမြန်နှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ ရေကအရမ်းမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဓာတ်တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကွောငျ့ကနွေးကြစေလွန်းပူမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အဆင့် 4: grapeseed ရေနံ Add
အရောအနှောထဲသို့နွေး grapeseed ရေနံ Add နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကရောမွှေပါ။ အဘယ်သူမျှမဟော်မုန်းရှိပါတယ်သေချာသည့် filtration လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီ swirls ။ အဆိုပါ beaker ၏အောက်ဆုံးသာရှင်းရှင်းလင်းလင်း Trenbolone Enanthate ဖြေရှင်းချက်ကိုပြသကြောင်းအာမခံပါသည်။
အဆင့် 5: filtering
ကြီးမားတဲ့ပြွတ်အတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဦးတည်း (ဒီတစျခုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပါလိမ့်မည်) ကိုတက်ဆွဲပါ။ အဆိုပါပြွတ်ဖို့ filter ကိုနှင့်ဆေးထိုးအပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နှင့်မြုံဖလားကိုသို့ထိုးသွင်း။
ပေါ်မှာအချို့သောဖိအားလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖလားကိုသို့ပြွတ် filter ကိုမှတဆင့်ဖြေရှင်းချက် Push ။ ဒီပြွတ် filter ကိုခွဲနိုင်နှင့်သင်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ဖိအားအများကြီးမသုံးပါနဲ့။
သင် filtration ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးကြောင်းသတိပြုမိခဲ့လျှင်, သင်ပြွတ် filter များသငျသညျ 40ml filtering ပြုအခါတိုင်းအကူးအပြောင်းနိုင်
အဆင့် 6: ပယ်လှန်ထုပ်သူတို့နှင့်အတူ Crimp
သင် filtration လုပ်ငန်းစဉ်ပြုမိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ဖြေရှင်းချက်ထုပ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအနှစ်ချုပ်မှာတော့ Trenbolone အီး Homebrew လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, သင်ယူကိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖန် beaker အတွက် Trenbolone Enanthate အမှုန့်အလေးချိန်နှင့် Benzyl Benzoate နှင့် Benzyl အရက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် (သင်အချို့ထံမှအွန်လိုင်း trenbolone enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ် စတီရွိုက်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း) ။ အဆိုပါကုန်ကြမ်း Trenbolone သည့်အမှုန့်ထဲတွင်ပျော်ဝင်မှစတင်သည်ဒါပေမယ့်သင်ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ကရေရေချိုးအတွက် beaker အပူနိုင်ဘူး။ အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ဓာတ်တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောကြောင့်ရေများလွန်းပူပြင်းပေမယ့်ရုံနွေးဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အရောအနှောထဲသို့နွေး grapeseed ရေနံ Add နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကရောမွှေပါ။ အဘယ်သူမျှမဟော်မုန်းရှိပါတယ်သေချာသည့် filtration လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီ swirls ။ ကြီးမားတဲ့ပြွတ်အတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဦးတည်း (ဒီတစျခုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပါလိမ့်မည်) ကိုတက်ဆွဲပါ။ အဆိုပါပြွတ်ဖို့ filter ကိုနှင့်ဆေးထိုးအပ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်နှင့်မြုံဖလားကိုသို့ထိုးသွင်း။
သင် filtration ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးကြောင်းသတိပြုမိခဲ့လျှင်, သင်ပြွတ် filter များသငျသညျ 40ml filtering ပြုအခါတိုင်းအကူးအပြောင်းနိုင်ဘူး။ သငျသညျအဖြေထုပ်ပြုပြီးတာနဲ့။
Trenbolone Enanthate အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သင်အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်း Trenbolone Enanthate ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
-Promote နိုက်ထရိုဂျင် retention ကို
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် cortisol ပမာဏ -Regulate ။
အတွက် -Aid အဆီဆုံးရှုံးမှု
Trenbolone Enanthate အသုံးပြုခြင်းကိုသင်လျင်မြန်စွာကြွက်သားကြီးထွားအောင်မြင်ရန်တမ်းတခဲ့ကြပါလျှင်သင်သည်သင်၏အပြည့်အဝအလားအလာနားလည်သဘောပေါက်ကိုကူညီခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Trenbolone Enanthate တစ်ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်စဉ်အတွင်းပိန်ကြုံသောကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်သင်ဖြတ်ခွင့်အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေမပါသံသယနှငျ့အတူရှိ၏။
နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုမြှင့်တင်ရန်
ရေထိန်းထားခြင်းကြောင့်ကြွက်သားထုထည်ရှိသော Steroids များနှင့်မတူဘဲ Therenbolone Enanthate ကိုယ်အလေးချိန်သည်နိုက်ထရိုဂျင်တိုးတက်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းကြွက်သားကြီးထွားမှုကို ဦး တည်စေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် cortisol ပမာဏထိန်းညှိ။
Trenbolone Enanthate လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့လုံအပေါ်ဖြည့်စွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာတိုးပွားလာဤအရပ်မှထုတ်လုပ် cortisol ပမာဏကိုထိန်းညှိ။
အာဏာအရှိဆုံးများ၏စာရင်းထဲတွင်ဖြစ်ခြင်း steroidsTrenbolone Enanthate သည်သင်အကြိုက်ဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုရန်စီစဉ်နေပါက၎င်းကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်ကအိမ်ပြန်ရန် Trenbolone Enanthate ကိုအွန်လိုင်းတွင်ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဟို Steroid တစ်မျိုးနဲ့သူတို့ကို Making, ပါမောက္ခဖရန့်, စာမျက်နှာ 1-47
မြေအောက်ဟိုဝီလျံ Llewellyn, Ronny Tober
9660 Views စာ
အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ကြွက်သားမြှင့်တင်ဖြည့်စွက်စာ- Urolithin A (UA) Powder
အဆုတ်ကင်ဆာဆေးဝါး“ Ceritinib (LDK378)”
သင်ကရောင်းရန် Dianabol Powder အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
6 ခြေလှမ်းများအတွက် testosterone ဟော်မုန်း enanthate Homebrew အောင်လုပ်နည်း DECA အမှုန့်-Ultimate လမ်းညွှန် Nandrolone Decanoate (Durabolin) Make လုပ်နည်း